Beautify keung wa: May 2011
အမြဲသွန်သင် အို မိခင်....။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 11:21 PM0comments
the unique loving-kindness
loving-kindness of mother
with the moon,the sun,
the flower and the stream
because mother is not wane
it is not the same the moon;
mother is not cloud,
it is not the same sun;
mother is not dry,
it is not the same the stream;
and mother is not drooping ,
it is not the same the flower
that having grown with mother's milk all everything greenly,
and having born peacefully,
mother is mother of the world,
and new smell of the world.
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 12:26 AM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 3:57 AM2comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:41 PM 1 comments
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မူအရ
မူလနှစ်ဖြာ၊ သစ္စာနှစ်ခု၊ လေးလွှာ၊ အင်္ဂါတစ်ဆယ့်နှစ်ပါး၊ တရားကိုယ်များနှင့် သုံးပါးအစပ်၊
နှစ်ရပ်မူလ၊ ၀ဋ် သုံးဝနှင့်၊ ကာလသုံးဖြာ၊ ခြင်းရာနှစ်ဆယ်၊ ဤရှစ်ဆယ်ကို။ အလွယ်ကျက်မှတ်၊ သိစေအပ်သည်၊ သံသရာမှ လွတ်ကြောင်းတည်း။
၁။ မူလနှစ်ဖြာ …. …. အ၀ိဇ္ဇာနှင့် တဏှာ။
၂။သစ္စာနှစ်ခု …. …. သမုဒယသစ္စာ - ဒုက္ခသစ္စာ။
၃။လေးခုအလွှာ …. …. အတိတ်အကြောင်းတလွှာ၊ ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွှာ။
၄။အင်္ဂါတစ်ဆယ့်နှစ်ပါး …. …. အ၀ိဇ္ဇာ , သင်္ခါရ , ၀ိညာဏ်, နာမ်ရုပ် , သဠာယတန ,ဖဿ, ဝေဒနာ, တဏှာ, ဥပါဒါန် , ကမ္ပဘသ, ဇာတိ , ဇရာ မရဏ။
၅။သုံးပါးအစပ် …. …. သင်္ခါရ နှင့် ၀ိညာဏ်တစပ် ၊ ဝေဒနာနှင့် တဏှာတစပ ၊ ကမ္မဘ၀နှင့် ဇာတိတစပ်။
၆။၀ဋ်သုံးဝနှင့် …. …. >>ကိလေသ၀ဋ် (၃)ပါး - အ၀ိဇ္ဇာ , တဏှာ , ဥပါဒါန်
>>ကမ္မ၀ဋ် (၂)ပါး- သင်္ခါရနှင့် ကမ္မဘ၀
>>၀ိပါက၀ဋ် (၈)ပါး-, ၀ိညာဏ်, နာမ်ရုပ် , သဠာယတန ,ဖဿ, ဝေဒနာ, တဏှာ, ဥပါဒါန် , ကမ္ပဘသ, ဇာတိ , ဇရာ, မရဏ (ဥပပ္ပတ္တိဘ၀)
၇။ကာလသုံးဖြာ …. …. >>လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကာလ - အ၀ိဇ္ဇာ , သင်္ခါရ
>>ယခုဖြစ်ဆဲ ပစ္စုပ္ပန် ကာလ - ၀ိညာဏ်, နာမ်ရုပ်, >>သဠာယတန ,ဖဿ, ဝေဒနာ, တဏှာ, ဥပါဒါန် , ကမ္မဘ၀
>>နောင်ဖြစ်လတ္တံ့ အနာဂတ်ကာလ- ဇာတိ , ဇရာမရဏ။
၈။ခြင်းရာနှစ်ဆယ် …. …. >>အတိတ်အကြောင်းခြင်းရာ ငါးပါး- အ၀ိဇ္ဇာ , သင်္ခါရ , တဏှာ, ဥပါဒါန် , ဘ၀
>>ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးခြင်းရာငါးပါး - ၀ိညာဏ်, နာမ်ရုပ်, သဠာယတန ,ဖဿ, ဝေဒနာ
အ၀ိဇ္ဖာနှင့် တဏှာ ရင်းခံ၊ ဥပါဒါန်၊ကံကြောင့်ရုပ်နာမ်ပေါ်အပင်မှမျိုး ၊မျိုးမှအပင်၊ အမျှင်မပြတ်၊ ဆက်စပ်သည့်ဟန်၊ ကံကြောင့်နာမ်ရုပ်ကြောင့်ကံ၊ အဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်နည်းအလျှော်၊ ဗြဟ္မာ-သိကြားစသည်များက ထင်ရှားပြုပြင်၊ စီရင်ဖန်ဆင်း၊ အကြောင်းရင်းကြောင့်၊ လူနတ်များစွာ၊ သတ္တ၀ါတို့၊ ဖြစ်လာရမှု မဟုတ်ဟုညဏ်ဖြင့် ရှု၍မျှော်။
ခန္ခာ (၅ )ပါး
ရုပ်တရား ၁။ရူပက္ခန္ဓာ ... ဖောက်ပြန်တတ်သော သဘောအစု သဘောအစု ဖြစ်-ပျက်မှု။
နာမ်တရား ၂။ဝေဒနက္ခန္ဓာ ... ခံစားတတ်သော သဘောအစု သဘောအစု ဖြစ်-ပျက်မှု။
၃။သညာက္ခန္ဓာ ... မှတ်သားတတ်သော သဘောအစု သဘောအစု ဖြစ်-ပျက်မှု။
၄။သင်္ခါရက္ခန္ဓာ ... ပြုပြင်တတ်သော သဘောအစု သဘောအစု ဖြစ်-ပျက်မှု။
၅။၀ိညာဏက္ခန္ဓာ ... သိတတ်သော သဘောအစု သဘောအစု ဖြစ်-ပျက်မှု။
အခံဓာတ်(၆)ပါး အတိုက်ဓာတ်(၆)ပါး အပွင့်ဓာတ်(၆)ပါး
၆ ၊စိတ်(ဘ၀င်စိတ်) ၁။အဆင်း
သစ္စာ(၄)ပါး ဒုက္ခသစ္စာ ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရား၊ ဖြစ်ဒုက္ခ-ပျက်ဒုက္ခပိုင်းခြားသိရမည့်တရား။
မဂ္ဂသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာ၏ ချုပ်ကြောင်း၊ သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ကြောင်း။
သမ္မာဝါယာမ သမ္မာသတိ သမ္မာသမာဓိ သမာဓိမဂ္ဂင်(၃)ပါး
သမ္မာဝါစာ သမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇိဝ သီလမဂ္ဂင်(၃)ပါး
၁။မြင်စိတ် အပြင်ဧည်သည်စိတ်(၅)ခု ၁။လောဘစိတ် အတွင်းဧည်သည်စိတ်(၅)ခု
၅။ယား၊ နာ၊ ကောင်းစိတ် ၅။အဒေါသစိတ်
၁။လေကိုထုတ်သောစိတ် ရှုပွားပုံရှုနည်းမှာ ၂၊လေကိုသွင်းသောစိတ် ၃။အိမ်သည်စိတ်(၂)ခု
အိမ်သည်စိတ်ကို(၂)ခုကို အရင်းခံထား၍ မည်သည့်စိတ်ပေါ်ပေါ်၊
ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်း ဖြစ်ပျက်မလွတ်အောင် ရှုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်နှင့် ဝေဒနာသည် ဖြစ်အတူ ပျက်အတူသဟဇာတ တရားဖြစ်သည်။
အပြင် ဧည့်သည် ဝေဒနာ(၆)ခု
၁။ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာသည်
၂။ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာသည်
၃။ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာသည်
၄။ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာသည်
၅။ သုခ ဝေဒနာသည်
၆။ ဒုက္ခ ဝေဒနာသည် မျက်လုံးမှာ ပေါ်သည်။
အထက်ပါ ဝေဒနာများကို အပြင်ဧည့်သည် (၆)ပါးခု ဟုခေါ်သည်။
၁။ သောမနှဿ ဝေဒနာသည်
၂။ ဒေါမနဿ ဝေဒနာသည်
၃။ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာသည် စိတ်မှာပေါ်သည်။
အထက်ပါ ဝေဒနာများကို အတွင်းဧည့်သည် (၆)ပါးခု ဟုခေါ်သည်။
အိမ်သည် ဝေဒနာ (၃)ခု
၁။ သားရေး၊ သမီးရေး၊ စီးပွားရေးမှ စ၍အရပ်ရပ် အဆင်ပြေနေသောအခါ (၀င်လေ-ထွက်လေကို) သောမနဿ ဝေဒနာနှင့် ရှူရှိုက်နေသည်။
၂။ သားရေး၊ သမီးရေး၊ စီးပွားရေးမှ စ၍အရပ်ရပ် အဆင်မပြေနေသောအခါ (၀င်လေ-ထွက်လေကို) ဒေါမနဿ ဝေဒနာနှင့် ရှူရှိုက်နေသည်။
၃။တစ်ခါတစ်ရံ(၀င်လေ-ထွက်လေကို) သောမနာဿလည်းမဟုတ် ၊ ဒေါမနဿလည်း မဟုတ်၊ ဥပေက္ခာဝေဒနာနှင့် အမှတ်မထင်ရှူရှိုက်နေသည်။
အထက်ပါဝေဒနာများကို အိမ်သည် ဟုခေါ်သည်။
ဝေဒနာနုပဿနာ ရှုရာ၌ ပေါ်သည် အချိန်၊ ပေါ်သည့်နေရာကို စောင့်၍ ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ ဝေဒနာသည် ဒွါရ (၆)ပေါက်၌ အမြဲဖြစ်သည်။ မဖြစ်သည့်အခါ မရှိ၊ ဖဿဖြစ်တိုင်းဝေဒနာဖြစ်သည်။ ဝေဒနာကို ရှုရာ၌ နာမှ ကျင်မှ ဝေဒနာမဟုတ်ပါ၊ နာမှု ကျင်မှု မခံသာသည့် ဝေဒနာရှိသလို ၊ နာမှု ကျင်မှု ပျောက်ကင်းပြီး ခံသာသည့် ဝေဒနာလည်းရှိသည်။ ခံသာသည်လည်း မဟုတ်၊ မခံသာသည်လည်း မဟုတ်၊ အလယ်အလတ် အမှတ်မဲ့ ခံစားမှု ၀ဒနာမျိုးလည်းရှိသည်။ စိတ်နှင့် ဝေဒနာသည် သဟဇာတ တရားဖြစ်၍ စိတ်ဖြစ်တိုင်း ဝေဒနာဖြစ်သည်။
ဝေဒနာသည် ပေါ်လည်း ပေါ်သည်၊ ပျက်လည်း ပျက်သည်၊ ဝေဒနာနှင့်ငါ-မရောစေနှင့် ၊ ဝေဒနာခွာ၍ အနိစ္စ မြင်အောင်ကြည့် ၊ အနိစ္စတွေ့မှ လမ်းမှန်ကျမည်။
(ဤကား အကျဉ်းချုပ်မျှသာ ဖြစ်သည်။)
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 8:42 PM0comments
Don' t be afraid of enemies who attack you.
Be afraid of the friends who flatter you.
General Obregon's philosophy,Mexico
Jude not, that ye be not judged.
သင့်ကလည်း ဘယ်သူကိုမှ အပြစ်မတင်ပါနဲ့...။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 11:14 PM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 11:09 PM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:56 PM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 11:49 PM0comments
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်း လည်ပုံ , ဖြတ်ပုံ, ဒေသနာတော...